0-18M 4Pcs / set ပန်းပွင့်လေးများပါခေါင်းမာနှင့် ဦး ထုပ်ပါသောပန်းရှည်ရှည်ဘောင်းဘီရှည် - အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အကောက်ခွန်မရှိ | WoopShop®
0-18M 4Pcs / Set ပန်းပွင့်လေးများပါသော Romper & ပန်းရှည်ရှည်ဘောင်းဘီရှည်နှင့် ဦး ခေါင်းနှင့် ဦး ထုပ်ပါရှိသည်
$13.49 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $16.99
Kid အမေရိကန် Size ကို 3M 6M 12M 18M
3 မီတာ / အဖြူ6မီတာ / အဖြူ 12 မီတာ / အဖြူ 18 မီတာ / အဖြူ
0-18M 4Pcs / Set ပန်းပွင့်လေးများပါခေါင်းလျှော်။ ဦး ထုပ်နှင့်ပန်းရှည်ရှည်ဘောင်းဘီရှည် - 3M / White backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
1x ထိပ်တန်းနှင့် 1x ဘောင်းဘီ & 1x ဦး ထုပ် & 1x Headband ပါဝင်သည်
အရွယ် ထိပ်ရှည် တွေဆီကနေ *2ဘောင်းဘီရှည် အကြံပြုခေတ်
70 ၃၈ စင်တီမီတာ / ၁၄.၉၆ " ၃၈ စင်တီမီတာ / ၁၄.၉၆ " ၃၈ စင်တီမီတာ / ၁၄.၉၆ " 0-3 လ
80 ၃၈ စင်တီမီတာ / ၁၄.၉၆ " ၃၈ စင်တီမီတာ / ၁၄.၉၆ " ၃၈ စင်တီမီတာ / ၁၄.၉၆ " 3-6 လ
90 ၃၈ စင်တီမီတာ / ၁၄.၉၆ " ၃၈ စင်တီမီတာ / ၁၄.၉၆ " ၃၈ စင်တီမီတာ / ၁၄.၉၆ " 6-12 လ
100 ၃၈ စင်တီမီတာ / ၁၄.၉၆ " ၃၈ စင်တီမီတာ / ၁၄.၉၆ " ၃၈ စင်တီမီတာ / ၁၄.၉၆ " 12-18 လ
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဆိတ်ကွယ်ရာခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ, တကအရွယ်အစား 70 များအတွက်မဟုတ်ဘဲကြီးတွေပုံရသည် .. ဒါပေမယ့်ငါကအတူမဟုတ်ရင်ဝမ်းသာတယ်။ နေချင်စဖွယ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ကောင်းစွာလုပ်!
костюмчикоченьпонравился! будуещезаказывать) продавцуспасибо)